Maitiro Ekuwedzera Google Analytics Campaign Kuchengeta kuHootsuite » Martech Zone
Maitiro Ekuwedzera Google Analytics Campaign Kuchengeta kuHootsuite
Wednesday, May 9, 2012 Chitatu, Nyamavhuvhu 22, 2018 Douglas Karr
Nezuro takazivisa izvozvo DK New Media yakanzi a Hootsuite Solution Partner. Isu tese tanga tichishandisa iyo Hootsuite Pro account yemakore akati wandei uye unoda kuenderera maficha uye kuchinjika zvave zvichipa timu yedu. Uye… iri pachikamu chemutengo wemazhinji enjini dzinotsikisa
Isu tanga tichimanikidza vese vatengi vedu kuti vawedzere zvizere mushandirapamwe wekutevera pavanotumira zvinongedzo zvavo Hootsuite. Vazhinji vanhu vanofunga vanofanirwa kunyora nemaoko iyo URL querystring - asi Hootsuite chaizvo inopa yakanaka kwazvo interface yekumisikidza inodiwa mushandirapamwe wekutevera ruzivo.
Mushandirapamwe wekutsvaga mubvunzo unoumbwa nematanho mashanu:
Campaign Kunobva (utm_source) - paramende inodikanwa. Shandisa utm_source kuona injini yekutsvaga, zita renhau, kana imwe sosi. Muenzaniso: utm_source = google
Campaign Medium (utm_medium) - paramende inodikanwa. Shandisa utm_medium kuona svikiro senge email kana mutengo-per- tinya. Muenzaniso: utm_medium = cpc
Campaign Nguva (utm_term) - paramende yekusarudzika. Inoshandiswa pakutsvaga kwakabhadharwa. Shandisa utm_term kucherechedza mazwi akakosha echi shambadziro ichi.
muenzaniso: utm_term = kumhanya + shangu
Campaign Yemukati (utm_content) - paramende yekusarudzika. Inoshandiswa pakuongorora kweA / B uye zvemukati-zvakanangwa ads. Shandisa utm_content kusiyanisa shambadziro kana zvinongedzo zvinonongedzera kuiyo chete URL. Mienzaniso: utm_content = logolink or utm_content = chinyorwa
Campaign Zita (utm_campaign) - paramende yekusarudzika. Inoshandiswa pakutsvaga kwemazwi makuru. Shandisa utm_campaign kuti uone chakasarudzika chigadzirwa chigadzirwa kana danho mushandirapamwe Muenzaniso: utm_campaign = chitubu_sale
Heano ekuvhara-kumusoro uko kwatakamisa iyo URL kuve nayo Google Analytics yekutsvaga mushandirapamwe. Kana iwe ukatarisa bhokisi rinosarudzika, unogona kuva naro nguva dzose kuwedzera mushandirapamwe wekutevera kune ese URL. Iyo haisi yakaipa zano ... uye inogona kukuendesa iwe kune radar yenzvimbo dzekunze dzauri kutumira yakawanda yekutumira traffic kune.
Paunopinda URL yako munzvimbo yekubatanidza, iwe uchaona giya iwe raunogona kudzvanya kudonhedza pasi epamberi minda yekuwedzera mushandirapamwe wekutevera. Imwe yema presets yatove Google Analytics. Kana iwe uri kushandisa imwe webhu analytics papuratifomu, unogona kuwedzera zviri nyore zvako zvekutanga pano, futi!
Tichave tichigovana akawanda akawanda matipi uye manomano pano ekuti unganyatso shandisa sei Hootsuite Pro kune ako emakambani masocial media mazano. Kuzivisa: Isu tichave tichigovana zvakabatana zvinongedzo kana isu tatumira izvi zvinyorwa.
Tags: analytics kuteedzeramushandirapamwe wekuteveragoogle analyticshootsuite
Chirevo, Chiono uye Kugovana Hupenzi
Ndatenda nechinyorwa chikuru ichi! Ini ndinonakidzwa chaizvo nekudzidza nezve aya matipi!